समाचार - पर्किन्स १00००kW कम्पन परीक्षणको विवरण
ईन्जिन: Perkins 4016TWG
वैकल्पिक: Leroy सोमर
प्राइम पावर: १00०० केडब्ल्यू
फ्रिक्वेन्सी: H० हर्ट्ज
घुमाउने गति: १00०० आरपीएम
इन्जिन शीतलन विधि: पानी-कूल्ड
१. प्रमुख संरचना
एक परम्परागत लोचदार कनेक्शन प्लेट ईन्जिन र वैकल्पिक जडान गर्दछ। ईन्जिन ful फुलक्रम्स र rubber रबर सदमे अवशोषकका साथ तय गरिएको छ। र अल्टरनेटर ful फुलक्रम्स र rubber रबर सदमेय शोषकहरूको साथ तय गरिएको छ।
यद्यपि, आज सामान्य जीनसेटहरू, जसको पावर १००० केडब्ल्यू भन्दा बढि छ, यस प्रकारको स्थापना विधि लिनुहुन्न। प्रायः त्यस्ता इन्जिनहरू र अल्टरनेटरहरू कडा लिंकहरूको साथ स्थिर छन्, र आघात अवशोषक जेनेट आधारमा स्थापित छन्।
२ कम्पन परीक्षण प्रक्रिया:
ईन्जिन सुरु हुनुभन्दा पहिले जेनेट बेसमा एक १ युआन सिक्का माथि राख्नुहोस्। र त्यसपछि एक सीधा दृश्य निर्णय गर्नुहोस्।
Test. परीक्षण नतीजा:
यसको मूल्या rated्कन गरिएको गतिमा पुग्न नसक्दासम्म इन्जिन सुरू गर्नुहोस्, र त्यसपछि सम्पूर्ण प्रक्रियाको माध्यमबाट सिक्काको विस्थापन स्थिति अवलोकन र रेकर्ड गर्नुहोस्।
परिणाम स्वरूप, जेनेसेट आधारमा स्ट्यान्ड १-युआन सिक्कामा कुनै विस्थापन र बाउन्स हुँदैन।
यस पटक हामी इञ्जिनको निश्चित स्थापनाको रूपमा सदमेय शोषक प्रयोग गर्न अग्रसर गर्छौं र जिनसेटको अल्टरनेटर जसको शक्ति १००० केडब्ल्यू भन्दा बढि छ। उच्च शक्ति जेनेट आधारको स्थिरता, जुन CAD तनाव तीव्रता, झटका अवशोषण र अन्य डाटा विश्लेषण संयोजन गरेर डिजाइन र उत्पादन गरिएको हो, परीक्षण मार्फत प्रमाणित भएको छ। यो डिजाइनले कम्पन समस्याहरू राम्रोसँग समाधान गर्दछ। यसले ओभरहेड र उच्च-वृद्धि स्थापनालाई सम्भव बनाउँदछ वा स्थापना लागत घटाउँदछ, जबकि जेनेट्स माउन्टिंग बेसको आवश्यकताहरू घटाउँदछ (जस्तै कंक्रीट)। यसका साथै कम्पनको कटौतीले जेन्सेटहरूको टिकाऊपन बढाउँदछ। उच्च-शक्ति जेन्सेटहरूको यस्तो आश्चर्यजनक प्रभाव दुबै देश र विदेशमा दुर्लभ छ।